I-Ritalin vs. Adderall: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Cindezela Imfundo Yezempilo, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo Umphakathi Inkampani, Imfundo Yezempilo
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Ritalin vs. Adderall: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Ritalin vs. Adderall: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Ritalin (i-methylphenidate) ne-Adderall (i-amphetamine / dextroamphetamine) yimithi emibili evame kakhulu yokwelapha esetshenziselwa ukwelapha i-ADHD noma ukunakekelwa kokushoda kokungasebenzi kahle. Ngezinye izikhathi, ukwelashwa kokuziphatha kunganele ukusiza ukuphatha i-ADHD. Ezimweni eziningi, noma kunjalo, ukwelashwa ngemithi efana noRitalin noma i-Adderall kuyadingeka.
Imithi ekhuthazayo isebenza ngokuvimba ukutholwa kabusha kwama-neurotransmitter athile ebuchosheni. Empeleni, le mithi isiza ukukhulisa umsebenzi we-norepinephrine ne-dopamine ukusiza ukuthuthukisa ukugxila nokuqapha. URitalin no-Adderall futhi bangasiza ekuthuthukiseni ukuvuka kubantu abane-narcolepsy.
Yize uRitalin no-Adderall besebenza ngezindlela ezifanayo, banokuhluka kwemithamo nokwakhiwa. Banokungafani ekutheni basebenza ngokushesha kangakanani nokuthi imiphumela yabo ihlala isikhathi esingakanani.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukaRitalin no-Adderall?
Umehluko omkhulu phakathi kukaRitalin no-Adderall usezithako zawo eziyinhloko. I-Ritalin iqukethe i-methylphenidate hydrochloride kanti i-Adderall iqukethe inhlanganisela ye-amphetamine ne-dextroamphetamine.
URitalin umuthi osebenza okwesikhashana ofinyelela emazingeni aphezulu emzimbeni ngesikhathi esifushane uma kuqhathaniswa ne-Adderall. I-Ritalin ingafinyelela amazinga aphakeme kungakapheli ihora eli-1 ngenkathi i-Adderall ifinyelela amazinga aphezulu ngaphezu kwamahora ama-3 ngemuva kokuphathwa. Ngale ndlela, uRitalin uqala ukusebenza ngokushesha kune-Adderall.
Ngokuphambene nalokho, u-Adderall ngokuvamile uhlala emzimbeni isikhathi eside kunoRitalin. Isigamu sempilo ngamahora ayishumi kuya kwali-13 e-Adderall namahora amathathu kuya kwayi-4 kuRitalin. Ifomu elisebenza isikhathi eside likaRitalin, elibizwa ngeRitalin LA, liyatholakala futhi lihlala cishe emahoreni ayisishiyagalombili.
Umehluko omkhulu phakathi kukaRitalin no-Adderall
Isigaba sezidakamizwa I-CNS Ishukumisayo I-CNS Ishukumisayo
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile I-Brand ne-generic iyatholakala I-Brand ne-generic iyatholakala
Yini igama elejwayelekile I-Methylphenidate I-Dextroamphetamine / usawoti we-amphetamine
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi yomlomo nethebhulethi ekhishwa enwetshiwe Ithebhulethi yomlomo kanye
Ithebhulethi yokukhishwa enwetshiwe
Uyini umthamo ojwayelekile? 20 kuya ku-30 ​​mg, kabili noma kathathu nsuku zonke njengokuyalelwa ngudokotela 5 kuya ku-40 mg kanye ekuseni bese njalo ngamahora we-4 kuye kwayi-6 njengokuyalelwa ngudokotela
Yelashwa isikhathi esingakanani? Ukusetshenziswa kwesikhashana noma kwesikhathi eside kungahle kufanele ngokuya ngemithi kadokotela wakho Ukusetshenziswa kwesikhashana noma kwesikhathi eside kungahle kufanele ngokuya ngemithi kadokotela wakho
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-6 nangaphezulu Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-3 nangaphezulu
Ufuna intengo engcono ku-Adderall?
Bhalisela izexwayiso zentengo ye-Adderall bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo eziphathwe nguRitalin no-Adderall
Uma wena noma ingane yakho kutholakala ukuthi ninayo I-ADHD , kungabekwa uhlelo olushukumisayo lwezinzwa oluphakathi noRitalin noma u-Adderall. URitalin no-Adderall bobabili bavunyelwe yi-FDA ukwelapha izimpawu ze-ADHD, njengokungaqapheli, ukungacabangi nokungazethembi. Yomibili le mithi nayo ivunyelwe yi-FDA ukwelapha i-narcolepsy, inkinga yokulala ebonakala ukozela emini kanye nesidingo sokulala ngokweqile.
Ukusetshenziswa okungekho kwelebula kukaRitalin no-Adderall kufaka ukwelashwa kwezinye izinkinga zempilo yengqondo njengokucindezeleka noma ukukhathazeka, ikakhulukazi ezigulini ezine-ADHD. Lezi zivuseleli zibuye zafundelwa ukwelapha ukuphazamiseka kwe-bipolar. Eyodwa Ukubuyekeza incwadi ithathe izikhuthazi ze-CNS indlela yokwelashwa engaba khona yokuphazamiseka kwe-bipolar yize ukusebenza kwayo kusacwaningwa.
I-claritin ayisebenzi ngingathatha enye into
Okunye ukusetshenziswa okungagunyaziwe kukaRitalin no-Adderall kufaka phakathi ukuncipha komzimba ukwelashwa nokwenza ngcono imisebenzi yokuqonda, njengokufunda nokukhumbula. Lokhu kusetshenziswa okungagunyaziwe kungaholela ekusetshenzisweni kabi kwezidakamizwa noma ekusetshenzisweni kabi kwabanye abantu. Ucwaningo luthole ukuthi, kulabo abangenayo i-ADHD, lezi zivuseleli musa ukuthuthukisa ukusebenza kwengqondo . Esikhundleni salokho, kungaholela emiphumeleni emibi yokuqonda.
Isimo URitalin Adderall
Ukunakwa kokushoda kokungasebenzi kahle (ADHD) Yebo Yebo
Ukuxokozela Yebo Yebo
Ukucindezeleka Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ukukhathazeka Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ukuphazamiseka kwe-bipolar Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ngabe iRitalin noma i-Adderall isebenza kangcono?
URitalin no-Adderall bobabili imithi ephumelelayo ukwelapha i-ADHD ne-narcolepsy. Inketho eyodwa ingasebenza kangcono ngokuya ngokuthi umzimba wakho uphendula kanjani kumuthi. Ukuthi usebenzisa amafomula akhishwa ngokushesha noma enwetshiwe-nakho kungathinta ukuthi umuthi usebenza kanjani kuwe.
Ngokuya nge- ukuhlaziywa kwe-meta okubandakanya izivivinyo zokwelashwa eziyi-133, i-methylphenidate isebenza kangcono njengomuthi wolayini wokuqala ezinganeni nasebusheni abane-ADHD. Ngoba i-ADHD yabantu abadala , I-Adderall kungaba yindlela yokwelashwa oyithandayo. Lokhu kuhlaziywa kuqhathanise nezinye izindlela zokwelashwa ezifana IStrattera (atomoxetine), Provigil (modafinil), futhi I-Wellbutrin (bupropion).
Olunye ucwaningo luthole nokuthi i-Adderall ingaba nethuba lokukhishwa ngokushesha kukaRitalin. Ngokuya ngohlaziyo olwedlule lwe-meta, i-Adderall ifaniswa noRitalin ngokusebenza nge ubude besikhathi yesenzo.
Ukwelashwa kwe-ADHD kuhlukaniswe ngamanye ngokuya ngezibonakaliso nezimpawu. Khuluma nodokotela wakho ukuthola izinketho ezingcono kakhulu kuwe noma enganeni yakho. Izinketho zokwelashwa zingabandakanya inhlanganisela yokwelashwa kokuziphatha nemithi.
Ukuhlanganiswa kanye nokuqhathaniswa kwezindleko zikaRitalin kuqhathaniswa ne-Adderall
Iningi le-Medicare nezinhlelo zomshuwalense zizofaka inguqulo ejwayelekile kaRitalin. Izindleko zokuthengisa ezijwayelekile zikaRitalin zisondele ku- $ 100. Esikhundleni sokukhokha izindleko ezigcwele zokuthengisa, iSingleCare inikeza ikhadi lesaphulelo elinganciphisa inani lemali likaRitalin ejwayelekile liye cishe ku- $ 21 kuye ngokuthi iyiphi ikhemisi oyisebenzisayo.
I-Adderall ivame ukumbozwa yizinhlelo eziningi ze-Medicare nezinhlelo zomshuwalense lapho kunqunywa njenge-generic. Amanye amacebo kungenzeka angabandakanyi imishanguzo enegama lomkhiqizo uma kukhona ejwayelekile ephansi ejwayelekile etholakalayo. Intengo ejwayelekile yokuthengisa ye-Adderall imvamisa ingaphezu kwama- $ 500. Ungasebenzisa ikhadi lokulondoloza le-SingleCare ukuthenga i-Adderall ejwayelekile ngemali ephansi njengo- $ 35.
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare? Yebo Yebo
Umthamo ojwayelekile 20 mg, inani lamaphilisi angama-60 30 mg, inani lamaphilisi angama-60
I-Medicare copay ejwayelekile $ 3– $ 69 $ 7– $ 78
Izindleko ze-SingleCare $ 21 $ 35
Imiphumela emibi ejwayelekile yeRitalin vs. Adderall
Imiphumela emibi ejwayelekile kaRitalin ukuphathwa yikhanda, ukuqwasha noma ukungakwazi ukulala, ukukhathazeka, ukujuluka okukhulu, ukukhuphuka kwenhliziyo (tachycardia), ukushaya kwenhliziyo, umlomo owomile, nesicanucanu.
Abantu abathatha i-Adderall bangaba nemiphumela engemihle ebandakanya ukuphathwa yikhanda, ukuqwasha, umlomo owomile, ukwethuka noma ukukhathazeka, ukushaya kwenhliziyo nokwanda kwenhliziyo.
Kokubili iRitalin ne-Adderall kungadala ubuhlungu besisu noma besisu kanye nokwehla kwesifiso sokudla. Ukwehla kwesifiso sokudla kungaholela ekulahlekelweni kwesisindo kwabanye abantu.
Imiphumela emibi kakhulu ayivamile futhi ivame ukwenzeka lapho le mithi ithathwa ngemithamo ephezulu kunokujwayelekile. Uma le miphumela emibi iba mibi ngokuhamba kwesikhathi, xhumana nodokotela ukuze uthole iseluleko sezokwelapha.
Imiphumela emibi Kusebenza? Imvamisa Kusebenza? Imvamisa
Ubuhlungu bekhanda Yebo * akubikiwe Yebo *
Ukuqwasha Yebo * Yebo *
Umlomo owomile Yebo * Yebo *
Isicanucanu Yebo * Yebo *
Ukunyuka kwenhliziyo Yebo * Yebo *
Ukushaya kancane Yebo * Yebo *
Ukukhathazeka Yebo * Yebo *
Ukuphelelwa isifiso sokudla Yebo * Yebo *
Isisu esibuhlungu Yebo * Yebo *
Umthombo: DailyMed ( URitalin ), IDailyMed ( Adderall )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kukaRitalin no-Adderall
URitalin no-Adderall bangaxhumana neminye yemithi efanayo. Le mithi ifaka i-monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), antihypertensives, kanye ne-anesthetics. Ukuthatha le mithi nge-Ritalin noma i-Adderall kungakhuphula ubungozi bemiphumela yenhliziyo, njengokushintsha komfutho wegazi noma ukushaya kwenhliziyo.
URitalin no-Adderall nabo bangaxhumana nezidakamizwa ze-serotonergic, kufaka phakathi eziningi imishanguzo njenge-fluoxetine ne-paroxetine. Ukuthatha le mithi ndawonye kungandisa ubungozi be-serotonin syndrome.
Uma kuqhathaniswa noRitalin, i-Adderall ingahle ihlanganyele nezidakamizwa eziningi. I-Adderall icutshungulwa kakhulu ngokuqinisekile ama-enzyme wesibindi , njengalezo zomndeni we-CYP2D6. Ngalesi sizathu, i-Adderall ingaxhumana ne-CYP2D6 inhibitors, engakhuphula amazinga e-Adderall futhi inyuse ubungozi bemiphumela emibi.
I-Adderall yaziwa futhi ngokusebenzisana nama-acidifying and alkalinizing agents. Le mithi ingathinta ukuthi i-Adderall ingene kahle kanjani emzimbeni.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa URitalin Adderall
IsocarboxazidPhenelzine I-Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) Yebo Yebo
Amlodipine Ama-antihypertensives Yebo Yebo
I-Desflurane Izinzwa zokubulala izinzwa Yebo Yebo
Sertraline Izidakamizwa zeSerotonergic Yebo Yebo
I-Atenolol I-Adrenergic blocker Yebo Yebo
I-ammonium chloride Ukwenza amanxusa asebenze Akunjalo Yebo
I-Acetazolamide Ama-alkalinizing agents Akunjalo Yebo
I-Ritonavir I-CYP2D6 inhibitors Akunjalo Yebo
Lolu akulona uhlu oluphelele lokusebenzisana kwezidakamizwa. Sicela uxhumane nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha le mithi.
Izexwayiso zikaRitalin no-Adderall
Izikhuthazi ze-CNS ezifana noRitalin no-Adderall kubikwe ukuthi zidala ingozi eyengeziwe yemicimbi yenhliziyo, efana nokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi. Abantu abanomlando wezinkinga zenhliziyo, njenge-arrhythmia yenhliziyo noma isifo semithambo yenhliziyo, kufanele qaphela lapho uthatha le mithi.
URitalin no-Adderall nakho kungadala umfutho wegazi okhuphukayo nokushaya kwenhliziyo. Labo abanengcindezi ephezulu yegazi abathatha imishanguzo yegazi kufanele babhekwe njalo ngenkathi bethatha into evuselelayo.
I-Ritalin ne-Adderall yizinto ezilawulwa ngoHlelo II ngokuya nge-DEA. Ukusebenzisa lezi zivuseleli kadokotela kungaholela ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa , kanye / noma ukuncika. Ukuyekiswa okungazelelwe kwale mithi kungakhuphula nobungozi bezimpawu zokuhoxa. Kubalulekile ukusebenzisa le mithi ngaphansi kweso lomhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo.
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwezikhuthazi ezinganeni kungaholela ekucindezelweni kokukhula. Ukuphakama nesisindo sezingane kufanele kukalwe kukho konke ukwelashwa ngezikhuthazi.
URitalin noma i-Adderall akufanele isetshenziswe ngesikhathi ukukhulelwa noma ukuncelisa ibele.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana noRitalin no-Adderall
URitalin umuthi wegama lomkhiqizo osetshenziselwa ukwelapha ukunakekelwa kokushoda kokungasebenzi (ADHD) kanye ne-narcolepsy. Isebenza njengesikhuthazi se-CNS ukusiza ukuthuthukisa ukugxila nokuphaphama. I-Ritalin iyatholakala njengesidakamizwa esijwayelekile ekukhululweni ngokushesha (i-Ritalin) nokukhishwa okunwetshiwe (i-Ritalin LA, i-Ritalin SR) ukwakheka.
I-Adderall ngumuthi kadokotela oqukethe inhlanganisela yama-amphetamine nosawoti we-dextroamphetamine. Kuvunyelwe i-FDA ekwelashweni kwe-ADHD kanye ne-narcolepsy. I-Adderall itholakala kuthebhulethi ekhishwa ngokushesha futhi enwetshiwe (Adderall XR).
Ngabe uRitalin no-Adderall bayafana?
URitalin no-Adderall basebenza ngezindlela ezifanayo kodwa abafani. I-Ritalin iqukethe i-methylphenidate kanti i-Adderall iqukethe i-amphetamine / dextroamphetamine.
Ngabe uRitalin noma u-Adderall ungcono?
I-Ritalin ne-Adderall yomibili imishanguzo esebenza kahle kadokotela yokwelapha i-ADHD ne-narcolepsy. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi uRitalin angahle abe ngcono ezinganeni nasebusheni ngenkathi i-Adderall ingaba ngcono kubantu abadala. Kubalulekile ukuxoxa ngalezi zinketho nodokotela ngoba ukwelashwa kuya ngesimo sakho sonke.
Ngingasebenzisa iRitalin noma i-Adderall ngikhulelwe?
Cha. URitalin no-Adderall abavame ukunconywa kwabesifazane abakhulelwe noma abancelisa ibele. Khuluma nodokotela ukuthola izindlela ezingcono zokwelashwa ze-ADHD ngenkathi ukhulelwe.
Ngingasebenzisa iRitalin noma i-Adderall ngotshwala?
Ukuphuza utshwala nge-Ritalin noma i-Adderall kungandisa ingozi yemiphumela emibi. Utshwala bungahlanganisa imiphumela yokuvuselela futhi kuholele emiphumeleni engalindelekile. Akunconywa ukuthi uphuze utshwala ngezikhuthazi.
Ngabe uRitalin uzizwa njengo-Adderall?
Njengezikhuthazi ze-CNS, bobabili uRitalin no-Adderall bakhiqiza imiphumela efanayo yokwelapha, njengokuqapha, ukuphaphama, nokugxila okwandayo. Emithini ephakeme, le mithi ingadala imizwa yokujabula namandla akhuphukile.
URitalin uqukethe i-methylphenidate, isikhuthazi esingaveza imiphumela efana naleyo yejubane. Ijubane, nokho, lisho izidakamizwa ezibizwa ngama-amphetamine. IMethamphetamine yisidakamizwa esivame ukuhlukunyezwa esibizwa ngejubane.
Ingabe uRitalin uyakujabulisa?
Abantu abaningi abathatha uRitalin babika imizwa yenjabulo, ikakhulukazi ku- imithamo ephakeme . Abanye abasebenzisi babika imizwa yokuzethemba kanye nogqozi. Yingakho iRitalin nezinye izikhuthazi zingaba yizidakamizwa ezakha umkhuba kwesinye isikhathi ezisetshenziswa kabi.
Isikhathi sokuqala ukuthatha amaphilisi e-ED? Funda ukuthi ungayithatha kanjani i-Viagra ukuthola imiphumela emihle
Thayipha 1 vs. Uhlobo 2 sikashukela: Uyini umehluko?
izinga lokushisa lomzimba elijwayelekile ku-fahrenheit yabantu abadala
yini ebangela amabhamuza abomvu esikhunjeni
kufanele ngithathe uvithamini d2 noma u-d3
yikuphi kokulandelayo okulusizo lomjovo wokuvimbela inzalo wedepho-provera?
I-cortizone 10 ithatha isikhathi esingakanani ukusebenza
umeleni u-d. uvithamini d